देशभर औषधि र खोप अभाव | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← प्रधामन्त्रीले भने- भूकम्प गएको तीन बर्षपछि मापदण्डको फिता र डण्डी लिएर जान मिल्छ ?
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण: अरुण तेस्रो दुवै नेताले शिलान्यास गर्ने →
काठमाडौं – स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको प्रमुख निकाय स्वास्थ्य सेवा विभाग नेतृत्वविहीन बन्दा देशभर औषधि र अत्यावश्यक खोपको अभाव हुने अवस्था आएको छ। विगत एक महिनादेखि महानिर्देशक नहुँदा जिल्लाजिल्लामा औषधि खरिदका लागि छुट्याइएको बजेट पठाउन रोकिएको छ। यसले गर्दा औषधि अभाव हुनुका साथै सर्पदंश र बहुला कुकुरले टोक्दा लगाइने (एन्टिरेबिज) को समेत खरिद अवरुद्ध भएको विभागले जनाएको छ। विभागअन्तर्गतका महाशाखा र केन्द्रका प्रमुखहरुलाई पाँच लाखसम्मको मात्रै कार्यक्रम स्वीकृति र भुक्तानी दिने अधिकार हुन्छ। त्यो पनि महानिर्देशकले अधिकार दिएपछि मात्रै गर्न पाइन्छ । पाँच लाखभन्दा बढीको औषधिलगायतका उपकरण खरिदको जिम्मेवारी महानिर्देशकमै हुन्छ।
निःशुल्क औषधि खरिदको बजेट दुई अर्बभन्दा बढी छ । त्यसमध्ये झन्डै ७० प्रतिशत रकमको औषधि केन्द्रले खरिद गर्छ। केन्द्रबाट खरिद गरिने २२ थरी औषधिका ३० करोड बराबरका टेन्डरको फाइल स्वीकृति र सम्झौता हुन बाँकी छ। त्योभन्दा बढी बजेट सेवा र उपकरण खरिदका लागि केन्द्रसँगै रहन्छ। महानिर्देशक नहुँदा बहुला कुकुरको टोकाइमा प्रयोग हुने अत्यावश्यक खोप एन्टिरेबिज सकिनै लागेको छ । ‘खोप दुईतीन साताका लागि मात्र मौज्दात छ। सम्झौता हुन नसक्दा नयाँ ल्याउन सकिएको छैन,’ आइतबार अवकाश पाएका इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. भीम आचार्यले भने। उनका अनुसार एन्टिस्नेक भेनम दुई महिनाका लागि पुग्ने जति छ। मान्छेको ज्यानै जाने खोपमा संवेदनशील हुनुपर्ने उनी बताउँछन्।
विभागका उपमहानिर्देशक चूडामणि भण्डारीले महानिर्देशक नहुँदा थुपै काम रोकिएको स्विकारे। उनले रोकिएको काम’bout मन्त्रालयमा बारम्बार जानकारी गराएको बताए।
राज्यमन्त्री अर्यालले जिम्मेवारी नपाएको भन्दै केही गर्न नसक्ने बताएकी थिइन्। बिहीबार पूर्ण जिम्मेवारी पाएसँगै अर्यालले नयाँ महानिर्देशक नियुक्ति’bout छलफल थालेको मन्त्री निकट स्रोतको भनाइ छ। ऐनअनुसार महानिर्देशकको पूर्ण नियुक्ति १२ तह (सचिव) सरहका चिकित्सक÷स्वास्थ्यकर्मीमध्येबाट मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्ति गर्छ। एघारौं तह (सहसचिव) सरहलाई दिँदा वरिष्ठलाई कामुको जिम्मेवारी दिन सकिन्छ।